Mampandohalika An’i Jamaika Ilay Otrikaretina Tsikongonià · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Oktobra 2014 20:01 GMT
Raha i Jamaika manokana izao dia toa sahirana tsy mahafehy ny fiparitahan'ilay otrikaretina sy ny tsy fahafantarana ny momba ilay aretina. Nanamarina ny bilaogera iray, “Cucumber Juice“, fa nandray anjara tanatin'ny “fandringanan'ny Tsikongonià” ireo “olon-tsotra Jamaikana”, saingy kianiny ihany koa ny fomba fandraisana an-tanàna nataon'ny ministry ny fahasalamana an'ilay krizy, tonga hatrany amin'ny fanolorany hevitra azy hametra-pialàna mihitsy aza:
Nandroso hevitra i Charmaine Wright, mpampiasa twitter, fa mila manao izay tratrany amin'ny fanaparitahana ny vaovao ho tonga eny anaty vondrom-piarahamonina ireo tompon'andraikitry ny fahasalamana, mba hifandraisany amin'ireo olona, indrindra fa ireo izay tsy mahay mamaky teny sy manoratra ary ireo tsy afaka mampiasa ny aterineto. Nandroso hevitra izy fa ny mozika no hevitra mety indrindra mba hahombiazana amin'izany. Raha ny marina, efa manana hira momba ny Tsikongonià i Jamaika.
Raha mampiasa ny tenifototra #chikungunya #caribbean (#Tsikongonià #karaiba) ireo mpampiasa Twitter, dia mizara vaovao mikasika ny fomba hanampian'ny fiovan'ny toetrandro ny fiparitahan'ilay aretina, momba ireo antotanisan'ireo matin'ny Tsikongonià isam-paritra, sy ireo zavatra maro hafa. Nangataka ny mpampiasa Twitter iray, Emma Lewis, monina ao Jamaika, hoe:
Tamin'ny Desambra 2013 no tranga voalohany indrindra tany #Karaiba!! (St Maarteen) #tsikongonià #karaiba Tsy nanam-potoana niomanana, nanabeazana ny vahoaka ve isika??
Nanontany ihany koa i Lewis raha hisy fiatraikany eo amin'ny politikan'ny governemanta Jamaikanina ilay aretina. Nanamarika ny mpiray tanindrazana iray, Jan Voordouw:
Tratran'ny tampoka i #Jamaika: tsy fahampian'ireo fanafody sy ny fandaminana ny tsy fahatongavan'ny mpiasa – raha efa tara ao anatin'ilay ady amin'ny #Tsikongonià
DEET no rano manitra vaovao. #jamaika #Tsikongonià
GM tweeps! Oha-pitenenana androany: “Raha mieritreritra ianao fa kely loatra ka tsy hahavita na inona na inona, andramo ny matory miaraka amin'ny moka.” #Tsikongonià #Jamaika
Ny governemanta, anefa, tsy mandray izany ho zava-mitranga mampihomehy mihitsy. Niresaka tamin'ny vahoaka momba ilay olan'ny fahasalamana ihany ny minisitry ny fahasalamana ny farany, ny Alahady 28 Septambra lasa teo. Mandritra izany fotoana izany, manohy ny fitadiavana hevitra hiadiana amin'ny fihanak'io aretina io hatrany ireo Jamaikanina.